China Hyperbolic aluminium veneer ifektri kanye nabaphakeli | I-Jixiang
IHyperbolic aluminium veneer inomphumela omuhle wokubonisa ukubukeka kwayo, ingakha izakhiwo ezenziwe ngezifiso, futhi ingakhiwa futhi icutshungulwe ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ukuhlangabezana nezidingo zokwakha ezenzelwe wena zephathi yokwakha. I-double curvature aluminium veneer isebenzisa ukwelashwa kwangaphakathi okungangeni manzi nokufaka uphawu, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwayo okungangenwa ngamanzi kakhulu. Ingasetshenziswa futhi ebusweni be-hyperbolic aluminium veneer Futha imibala ehlukahlukene kapende ukuze uthuthukise umthelela wokubuka. Ukukhiqizwa kwe-hyperbolic aluminium veneer kunzima kakhulu, futhi izidingo zokunemba komshini nezidingo zokusebenza zabasebenzi bezobuchwepheshe ziphakeme kakhulu, ngakho-ke i-hyperbolic aluminium veneer inokuqukethwe okuqinile kwezobuchwepheshe.
I-Hyperbolic aluminium veneer inomphumela omuhle wokubonisa ukubukeka kwayo, ingakha izakhiwo ezenziwe ngezifiso, futhi ingakhiwa futhi icutshungulwe ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ukuhlangabezana nezidingo zokwakha ezenziwe ngabantu beqembu lokwakha. I-double curvature aluminium veneer isebenzisa ukwelashwa kwangaphakathi okungangeni manzi nokufaka uphawu, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwayo okungangenwa ngamanzi kakhulu. Ingasetshenziswa futhi ebusweni be-hyperbolic aluminium veneer Futha imibala ehlukahlukene kapende ukuze uthuthukise umthelela wokubuka. Ukukhiqizwa kwe-hyperbolic aluminium veneer kunzima kakhulu, futhi izidingo zokunemba komshini nezidingo zokusebenza zabasebenzi bezobuchwepheshe ziphakeme kakhulu, ngakho-ke i-hyperbolic aluminium veneer inokuqukethwe okuqinile kwezobuchwepheshe. Inezici zesisindo esincane, ukuqina okuhle, amandla aphakeme, ukucisha umlilo nomswakama-ukufakelwa, ukufakwa okulula nokugcinwa, nokuphila isikhathi eside.
Ukuma kwayo okuhlukile kwe-arc kwenza izakhiwo zomhlaba ezigobile lapho i-aluminium veneer ejwayelekile ingenakusetshenziswa khona. Ngoba imigqa yokuhlobisa kwangaphandle kodonga isuka odongeni iye ekwakhiweni kwamanye amajika e-arc, igqamisa isimo sobuciko esiguqukayo nesishintshayo.
1. Isimo esihlukile, esibonisa ubuhle bendawo egobile;
2. Ubukhulu, ukuma nobuso enamathela kungenziwa egcizelele;
3. Umbala, okusanhlamvu kwokhuni nokusanhlamvu kwamatshe kuyatholakala kabanzi, futhi umphumela wokuhlobisa muhle;
4. Ukuzihlanza okuhle, akulula ukungcoliswa, kulula ukuyihlanza nokuyigcina, izindleko eziphansi zesondlo;
5.Ukwakhiwa kwesakhiwo esenziwe ngabantu, ukulayishwa okulula nokulayishwa, ukufakwa okulula nokwakhiwa;
6. Ikhwalithi evelele, ehlala isikhathi eside, impilo ende yokusebenza, ukusebenza kwezindleko eziphezulu;
7. Ingaphandle langaphandle elinamathelayo lifana, licwebezela, liyamelana nezingubo futhi liyamelana nokuklwebheka, futhi akulula ukufiphala;
8. Ingabuye isetshenziswe futhi iphinde isetshenziswe kabusha, okuyinzuzo ekuvikelweni kwemvelo.
Isetshenziswa kabanzi ezibhedlela, ezitimeleni ezihamba ngaphansi komhlaba, eziteshini, ezikhumulweni zezindiza, eminyuziyamu, emahholo ezinkomfa, ezindaweni zokuhlala ezisezingeni eliphakeme, njll.
Langaphambilini I-4D mbumbulu yezinhlamvu ze-aluminium veneer
Olandelayo: I-anti-bacterial and antistatic aluminium ipuleti lepulasitiki